Izikhululo zeenqwelo moya zase Bangkok zokuSebenza njengezibhedlele ze-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Izikhululo zeenqwelo moya zase Bangkok zokuSebenza njengezibhedlele ze-COVID-19
Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-COVID-19 izibhedlele zentsimi
UMphathiswa Wezothutho waseThailand uSaksayam Chidchob uthe kule mpelaveki ukuba amalungiselelo ezinye iibhedi ezingama-7,000 enziwe ngenxa yemeko yangoku ye-coronavirus ngohlobo lwezibhedlele ze-COVID-19, njengoko inani elikhulu lezigulana lilinde unyango.
I-COVID-19 zezibhedlele zentsimi ziya kusekwa kwiindawo ezingasetyenziswanga kwizikhululo zeenqwelo moya ze2.
Isikhululo senqwelomoya iSuvarnabhumi sodwa siya kuba nakho ukuhlalisa ngaphezulu kwamaxesha e-3 abaguli abaninzi njengesibhedlele iBussarakham.
I-Japan iye yangenelela nge-1.5 yezigidi zeedosi zokugonywa kwe-AstraZeneca ukunceda iThailand kwidabi layo lokulwa ne-COVID-19.
Iindawo ezingasetyenziswanga zesikhululo seenqwelomoya iSuvarnabhumi kunye neDon Mueang ziya kusetyenziswa ekumiseni izibhedlele.
USaksayam uthe urhulumente usigqibile isivumelwano sengqesho sethutyana Iinqwelomoya zeThailand (AOT), kuba ukuqeshisa iSibhedlele iBussarakham e-Impact Muang Thong Thani kwiphondo laseNonthaburi kuyakuphelelwa ngo-Agasti.
Ngokuka-Mnumzana Saksayam, isibhedlele esikhululo seenqwelomoya iSuvarnabhumi siza kuba nakho ukubamba ngaphezulu kwamaxesha e-3 inani lezigulana zase-Bussarakham Hospital. Ukongeza, isikhululo seenqwelomoya iDon Mueang sikwinkqubo yokulungiselela isakhiwo sogcino ukulungiselela ukumiswa kwesibhedlele endle, esiya kuba Iibhedi ezingama-2,000 zabaguli ngeempawu ezincinci.
IJapan iyangenelela ukunceda
Urhulumente wase-Thai ubambe umsitho osemthethweni nge-12 kaJulayi yokufumana idosi ye-1.5 yezigidi ze-AstraZeneca COVID-19 yokugonya enikelwe ngurhulumente waseJapan ukunceda ukulwa ukusasazeka kwe-COVID-19.